I-TLC Lakehouse ene-canopy yesikebhe ubhavu oshisayo, i-fiber wifi
French Lick, Indiana, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Lisa And Terry
Le ndlu ethokomele ye-cabin host kuze kufike ku-6. Cishe imizuzu eyi-12 ukusuka e-Patoka Marina kanye ne-15 ukusuka e-Hoosier, kodwa nina eniletha isikebhe sakho lokhu kuhle !! Inompheme wesikebhe omnandi ongapaka kanye nokushayela ukuze ufinyeleleke kalula. Irempu yabadwebi iyimizuzu emi-2 phansi komgwaqo, irempu yezindonga ingemuva kwe-rd. Ikhabhinethi isendaweni eyi-2 acre ebekwe endaweni enhle enomthunzi. Inesicishamlilo sikakhonkolo esinamabhentshi kanye nokushwiba. i-gas grill kanye netafula lepikiniki. umbhede okhululekile wendlovukazi uvuselelwe ngokugcwele .fiber optic
Yize lokhu kunekheli le-French Lick, okuyikhasino eliyimizuzu eyi-10 phansi komgwaqo, i-Patoka ikude ngamaminithi futhi. Kukhona i-winery nezindawo zokudlela eziseduze kodwa le khabethe inesikhalo esinjalo sokujabulela igceke nekhabethe uma ufuna ukuhlala uphumule. I-Bullfrog Ubhavu oshisayo kuvulandi ongemuva. Ine-gazebo phezu kwayo ukuze inikeze ubumfihlo obuningi nokuvikelwa esimweni sezulu. I-Paoli Peaks iyindlela enhle yokushayela esifundeni cishe ngamamayela angu-13. I-Hoosier National Forest iyimizuzu eyi-15 phansi komgwaqo kanti ipaki iPatoka iqhele ngemizuzu eyi-10. Kukhona ulwandle kanye nezindlela ongajabulela ngazo epaki
4.94(35 okushiwo abanye)
Umakhelwane unokuthula kakhulu. Kukhona ubumfihlo ngemuva kwendlu lapho wonke umuntu engajabulela khona ukulungiselelwa okuzolile.Ibhavu elishisayo kuvulandi ongemuva eline-gazebo ukuze ilethe ubumfihlo nokuvikelwa okwengeziwe.
Ibungazwe ngu-Lisa And Terry
ungathumela noma yimiphi imibuzo ku-8129463671
ULisa And Terry Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- French Lick namaphethelo